Re: Matokia | Martech Zone
Alarobia 14, 2013 Alahady, Aogositra 2, 2015 Douglas Karr
Nitranga indray izany. Nandritra ny fotoana nijereko ny lisitry ny mailaka (tsy hay tohaina) namely ny boaty, dia nahatsikaritra ilay mailaka valiny aho. Mazava ho azy fa natomboka ilay andalana RE: ka nahasarika ny masoko izany ary nosokafako avy hatrany.
Saingy tsy valiny izany. Mpivarotra iray izay nieritreritra fa hampiakatra ny tahan-keviny amin'ny lainga amin'ny mpamandrika rehetra. Raha nahomby ny tahan'ny fisokafany, very fanantenana fotsiny izy ireo ary nanampy ny fisoratany anarana tamin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo. Angamba ny tahan'ny fisokafana dia nitarika ho amin'ny tsindry sy fivarotana sasany, saingy tsy hanao raharaha amin'ny olona toa an'ity aho.
Trust dia ny fahasamihafana misy eo amin'ny olona manokatra sy manindry ny mailakao mailaka hafatra sy ny olona iray izay tena mividy sy manao orinasa miaraka amin'ny orinasao. Raha tsy azoko itokisana ianao handefa mailaka marina amiko, tsy azoko atokisana ianao hiditra amina fifandraisana lalina lalindalina kokoa amiko.
Aza diso hevitra aho, tsy fitokisana tanteraka ny momba ny fitokisana. Tsapako fa indraindray ireo orinasa matoky dia tsy maintsy "manamboatra azy io mandra-pahatongany" miaraka amin'ny fanamarinana, valin'ny fanadihadiana, fijoroana vavolombelona, ​​filaharana, hevitra, sns. Ny fananana fisian'ny tranonkala izay mitarika fahatokisana dia paikady lehibe hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po.
Ny olana manokana eto dia efa nisy sahady isika fifampitokisana rehefa nisoratra anarana tamin'izy ireo aho. I nomena ny adiresy mailaka amin'izy ireo hahafahan'izy ireo mifandray amiko. Fa miaraka amina hetsika no misy andraikitra tsotra… aza zaraiko ny adiresy mailaka, aza manararaotra ny adiresy mailakao ary aza mandainga amiko amin'ny mailaka.
Tsy ny hevitro ihany io. Mino aho fa mandeha andalana manify miaraka amin'ny lalàna CAN-SPAM ianao. Ny CAN-SPAM dia tsy hoe mikasika ny fahafaha-misoratra anarana fotsiny, milaza mazava koa izy fa tsy maintsy manana andalana foto-kevitra mifandraika amin'izany ianao - mifandraika amin'ny atiny amin'ny vatana fa tsy mamitaka. IMO, mamitaka ny hoe "Re:" ao amin'ny laharam-pianaranao dia mamitaka.
Aza atao intsony.
Tags: Can-amin'ny spamandalana foto-kevitra mamitakamailakatsipika momba ny mailakarenavalin'iamin'ny spamandalana foto-kevitrafahatokiana
Ny olako amin'ny lozisialy fitantanana tetikasa
3 Septambra 2013 à 5:39
Na dia tsy mitovy hevitra aza aho. Mety ho lasa crotchety kely ianao. Lazao fotsiny. 😉
Sep 4, 2013 amin'ny 9: 46 AM
@curtfranke:disqus – lasa?
Sep 4, 2013 amin'ny 11: 08 AM
I'm with you. (Anontanio fotsiny ny zanako.)
5 Septambra 2013 à 6:53
Heveriko fa entin'ny olona tsy misaina izay miezaka manatsara ny metrika tsirairay tsy miraharaha ireo metrika mifandraika amin'izany. Tahaka ny fieritreretana fa ny fitomboan'ny fijerena pejy dia midika ho vola.